Thermoforming Flexible Packaging Umatshini
Thermoforming umatshini wokupakisha womoya oguqulweyo
Umshini wokupakisha ulusu we-Thermoform
Iyaqhubeka ukutywina itreyi ngokuzenzekelayo
Cinezela ukupakisha umatshini
Imicimbi yephakheji kukhuseleko lokutya
ngomphathi ku 21-10-23
Ukukhula ngokukhawuleza koqoqosho kukhokelele kukonyuka okumandla ekupakishweni kokusetyenziswa kwezinto ezahlukeneyo, ngakumbi kwimveliso yezolimo kunye necala, ukutya, amayeza, kunye nezixhobo zobuchwephesha. Ukhuseleko lokutya ngumbandela wehlabathi. Ngokukhawulezisa ukufudukela kwabantu ezidolophini, ukutya inyama okuninzi ...
Intshayelelo kwiindidi zoomatshini beThermoforming
ngomphathi ku 21-10-15
Ipakethe yeUtien Co, .Ltd. ngumvelisi ogxile kwimveliso yoomatshini bokupakisha abasebenza ngokuzenzekelayo, oomatshini bethu be-thermoforming banenqanaba eliphambili eTshayina. Kwangelo xesha, saqaphela kwaye sinconywa kakhulu ngabathengi abaninzi bamanye amazwe. Nantsi intshayelelo emfutshane kwi-auto ...
Iphakheji yenguqu, imfihlo kugcino olude
Umbuzo ubusokolisa abenzi bokutya abaninzi: Ungabandisa njani ubomi beshelfu yokutya? Nazi iindlela eziqhelekileyo: yongeza i-arhente yokubulala iintsholongwane kunye nokugcinwa ngokutsha, ukupakishwa kwe-vacuum, ukupakishwa komoya oguqulweyo, kunye netekhnoloji yokulondolozwa kwemitha yenyama. Ngaphandle kwamathandabuzo, iphakheji efanelekileyo ...
Landela imigaqo-4 esisiseko yokupakisha ukwenza ukutya kwakho kuthandwe ngakumbi
Ukukhetha ukutya Kule mihla, singene kwixesha elitsha lokusetyenziswa, ukutya akusengokugcwalisa isisu, kodwa okungakumbi kukufumana ukoneliseka ngokwasemoyeni ngelixa ukonwabela. Ke ngoko, xa ukhetha ukutya njengomthengi, abo bajonga umgangatho kunye nokunambitha baya kukhethwa ngokulula ...
INDLELA YOKWENZA IBHAKILE YAKHO IME PHANTSI
Ukujongana nokulungiswa kwe-homogenization yeemveliso zeshishini lokubhaka namhlanje, abavelisi abaninzi baqala ukusebenzisa impembelelo yokupakisha kumtsalane oqhubekayo wabathengi. Ke, ulwalathiso lwexesha elide lophuhliso lwamashishini ukwahlulahlula ukupakisha kunye nokuyila ukupakishwa ngokuhambelana ne ...
Kuyafana nokupakishwa komshini, kutheni le nto kupakishwa kuthandwa ngakumbi?
Ukupakishwa komshini kuhlala ngaphezulu kwehafu yentengiso yokupakishwa kokutya. Ixesha elide, ukupakishwa kwe-vacuum kudala kusenziwa ngesandla ngoomatshini bokupakisha abancinci. Umsebenzi ongenamsebenzi onzima nophindaphindayo owenza ukuba kube nzima ukufezekisa imveliso yobuninzi. Ise ...
Ngaba ukulungele ukutya okulungiselelwe?
-Hey, ixesha lesidlo sasemini. Masiyothatha ukutya! -KULUNGILE. Uya phi? Utye ntoni? Kude kangakanani ... -Oo thixo wam, yima, kutheni ungajongi iapp kunye noku-odola into kwi-intanethi? -Uluvo olulungile! Leyo yintetho eqhelekileyo malunga nabafana ababini abadidayo malunga nesidlo esilandelayo. Ngexesha lobomi obukhawulezayo, ukutya okulungiselelwe kuya kusanda kwaye m ...
Ipakethe ye-UTIEN yazisa ngoluhlu lwayo olutsha lwePakethe ye-MAP
Ukupakishwa komoya oguqulweyo: ukwandisa ixesha lokulondolozwa kweemveliso Kule mihla abantu banesidingo esandayo sokusombulula ingxaki yokulondolozwa kokutya kunye neengxaki ezinxulumene noko. Kwakhona, kukho iintlobo ezahlukeneyo zeephakeji zabathengi abanokuzikhetha kwimarike. Alithandabuzeki elokuba kufuneka sikhethe ...
Umatshini wokupakisha ngokuzenzekelayo uzise umzekelo olungileyo kwimveliso yobungcali
Kwiminyaka yakutshanje, kunye nophuhliso kushishino lwasekhaya, ukwanda okuqhubekayo isikali imveliso, ukusebenza imveliso kunye nezinye iimfuno, uphuhliso olukhawulezayo zonke iintlobo automated, umgca wemveliso yobungcali okrelekrele, ingakumbi intsimi ukuphakheja olunzulu zabasebenzi. Kwa Presen ...
Ukupakisha okuzenzekelayo umgca wemveliso unokuba yinto entsha kwixa elizayo
Ngokonyuka kweemfuno zabathengi, ayisiyiyo kuphela umgangatho kunye nokusebenza kweemveliso ekufuneka zingqongqo ngakumbi, kodwa kunye nokuchaneka kwethamo lokupakisha kunye nobuhle bembonakalo yokupakisha kuyafuneka ukuba kwenziwe kube ngokwakho. Ke ngoko, ukukhula ngokukhawuleza koomatshini bokupakisha ...